सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण लिन तयार हुनुहोस् ! के छ ऋण पाउने प्रक्रिया ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋण लिन तयार हुनुहोस् ! के छ ऋण पाउने प्रक्रिया ?
काठमाडौं । काम र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको सरकारले सर्टिफिकेट धितो राखेर ऋणदिने कार्यविधि तयार पारेको छ । ‘देशमा केही गर्न चाहनेलाई मंसिरदेखि ऋण दिन सुरु गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न ७ वटा शीर्षकमा सहुलियत दरमा दिइने ऋण दिने कार्यविधि तयार पारेको हो । सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरे पनि कुनै पनि व्यक्तिले दोहोरो ऋण नपाउने जनाएको छ ।
सहुलियतमा दिने कर्जाको समायावधि ५ वर्ष तोकेको छ । ५ वर्षभित्र ५ प्रतिशत ब्याजसहित ७ लाख रुपैयाँ तिरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा प्रष्ट लेखिएको छ । यदी ५ वर्षभित्र ऋण नतिरेमा राज्यले दिने कुनै पनि सेवा नदिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले पहिले नै भएको पशुपालन व्यवसाय कर्जालाई केही नयाँ प्रावधानसहित फेरि लागू गर्नेछ । यसको लागि पनि कार्यविधि बनिसकेको छ ।
यस्तै महिलाले सामूहिक रुपमा उद्यम गर्न चाहेमा ६ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउने छन् । विदेशबाट फर्किएकाहरुले विदेशमा सिकेको सीपका आधारमा नेपालमा उद्यम गर्न चाहेमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण पाउने पनि अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको छ । यसको पनि कार्यविधि बनिसकेको छ ।
यस्तै दलित समुदायले केही व्यवसाय गर्न चाहेमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा १० लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् । पढ्न मन भएका तर पैसा नभएर पढ्न नपाएका विपन्न समुदायका युवाहरुले शैक्षिक ऋण पाउनेछन् । यसको पनि कार्यविधि बनिसकेको छ । प्लस टु पास गरेका विपन्न समुदायका युवाले ५प्रतिशत ब्याजदरमा ५ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनेछन् ।
र भूकम्प पीडितले पनि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ३ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउन सक्नेछन् । सरकारले दिएको ३ लाख रुपैयाँ अनुदानले घर बनाउन नपुगेको वा केही इलम गर्न चाहनेले यो ऋण पाउनेछन् । कार्यविधिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण पाउनको लागि स्नातक तह पास गरेकै हुनुपर्ने उल्लेख छ । ४० वर्ष ननाघेको पनि हुनुपर्नेछ । ४० वर्षभन्दा माथि उमेरकाले प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण नपाउने कार्यविधिले जनाएको छ ।
समलिंगी जोडीले यसरी पाए भिसा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एक समलिंगी जोडीले वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा गैर पर्यटकीय भिसा पाएका […]
किन रगतले रंगियो रंगेली ?
ओली र मधेसी नेताको प्रतिष्ठाको लडाइँमा तीन सर्वसाधारणको ज्यान गयो घटनाको पृष्ठभूमि १ केपी ओली र […]
सिड्नी, अष्ट्रेलियामा अमेरिकामा दिइएको जस्तो टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्ट्याटस टीपीएस अध्यागमन दिन नसकिने […]
यकुब मेमनलार्इ बिहानै फासी, मुम्बर्इको सुरक्षा व्यवस्था कडा
साउन १४ । काठमाडौँ, मुम्बई हमलाका दोषी यकुब मेमनलाई भारतको सुप्रिम कोर्टले बिहीबार बिहानै झुण्डाएर मृत्यु […]
विद्रोहीद्वारा यमनको सत्ता कब्जा
माघ २४ ।यमन, यमनमा हुती विद्रोहीले संसद भंग गरेर आफूहरुले सत्ता हातमा लिएको घोषणा गरेका छन् । यो समूहले […]